June 8, 2021 160
नेपाली रुपै`या भन्नुको मतलव एक अमेरिक डल`रको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदे`शी मुद्राको कारोबा`रको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा विनि|यम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बु`झाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रालाई अर्को मुद्रा|मा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई वि|निमय दर भनिन्छ ।
उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मत|लव एक अमेरिक डलर`को मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मु|द्राको कारो`बारको सुपरि`वेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबा|रका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ ।जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ११९ पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ ।
यसै`गरी युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्री`दर १४२ रुपैयाँ रहेको छ ।बेलायती पाउण्ड एक`को खरिददर १६४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
Prevसंक्रमणपछि कालो ढुसीबाट बचेका यी व्यक्तिले आफ्नो जिबन बचाउन ‘आँखानै का`ट्नू पर्ने बताए’ (भिडियो सहित)
Nextआज नेपालमा सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नु`होस् मूल्य
दुई श्रीमतीले गरे श्रीमानको बाँड-फाँट ३ दिन जेठीसँग, ३ दिन कान्छीसँग, १ दिन छुट्टि !
ज्ञानेन्द्र शाहीकै अगाडि गाडी दु र्घ’टना, घा इते’लाई यसरी बचा ए (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132840)